सधैं कंगनाविरुद्ध बोल्ने करण जोहर किन एकाएक फेरिए ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
सधैं कंगनाविरुद्ध बोल्ने करण जोहर किन एकाएक फेरिए ?
मुम्बई। करण जोहर र कंगना रनोटको झगडा कसैबाट लुक्न सकेको छैन । उनीहरु एक–अर्काविरुद्ध लगातार बयानबाजी गर्दै आएका छन् । तर हालै करण जोहरको कंगनाका लागि रवैया परिवर्तन भएको छ । उनले कंगनाको तारिफसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कंगना इन्डष्ट्रिकी उत्कृष्ट नायिकामध्येकी एक हुन् । म भविष्यमा उनीसँग काम गर्न चाहन्छु ।’
दुई वर्षअघि कंगना करणको च्याट शो ‘कफी विद करण’ मा पुगेकी थिइन् । कार्यक्रममा कंगनाले करणमाथि नेपोटिजम (भाइभतिजावाद) को आरोप लगाएकी थिइन् , उनले भनेकी थिइन्, ‘करणले यो क्षेत्रमा भाइभतिजावादलाई प्रोत्साहन दिन्छन् । उनी फिल्मका माफिया हुन् र सेलिब्रिटीका सन्तान र उनीहरुका आफन्तसँग मात्रै काम गर्छन् । ’ कंगनाको यो बयानपछि करण निकै रिसाएका थिए र उनी धेरैजसो कंगनाबाट टाढै बस्दथे ।
यस्तै, केही हप्ताअघि करणले एक अन्तरवार्तामा कंगनामाथि कटाक्ष गरेका थिए । युट्युबर भुवन बामको कार्यक्रममा पुगेका करणले केही यस्ता व्यक्ति छन् जसले भाइभतिजावादलाई मन नपराउने बताएका थिए । यसबारे उनले भने, ‘तर उसलाई मन नपरे अरुलाई त पक्कै मनपर्छ । त्यसकारण मैले ती व्यक्तिलाई सबै कुरा गर्नका लागि छोडिदिएको छु र म आफ्नो काम गरिरहेको छु ।’ करणको इशारा कंगनाप्रति थियो ।